Manomboka Mandeha Ao Karakas NY WSF · Global Voices teny Malagasy
Manomboka Mandeha Ao Karakas NY WSF
Voadika ny 31 Desambra 2018 16:37 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 24 Janoary 2006)
Teny ampiasaina hilazàna ny fomba vaovao fanaovana politika ny WSF. Mihatonga saina ny olona – avy any amin'ny tanora indrindra mankany amin'ireo mpiady ara-tantara izay mbola miady foana – fa mihoatra lavitra ny fisoloana tena ny antoko na parlemanta tsotra izao ny atao hoe politika. Te-handray anjara amin'ny fanovàna ny zavamisy iainany sy izao tontolo izao izy ireo, isanandro ary tsy hoe tsindraindray amin'ny fotoanan'ny fifidianana irery ihany. Mihevitra aho fa tokony hahatakatra izany lojika izany ho toy ny fironana tsara mankany amin'ny fahafahana ireo antoko avy amin'ny hery havia. Na izany aza, misy ny fanoherana. Eo ireo mandoa vola mba hibodoana ny fisoloana tena ary hiezahana hifehy ny Sehatra Fanehoankevitra.
Izany no hazavain'i Antonio Martins (Espaniola), avy ao amin’ny Ciranda Iraisam-pirenena Ho An'ny Vaovao Tsy Miankina, izay mifandray amin'ny Sehatra Fanehoankevitra World Social (WSF).
Vao nanomboka mihitsy teo anivon'ny adihevitra (Espaniola) mikasika ny fitsabahan'ireo antoko, ny fifandirana momba ny volam-bahoaka, ny fikatrohana ary ny fizarazarana ny Sehatra Fanehoankevitra Manerantany Andiany Faha-6. Na izany aza, milaza ny Periodismo para la paz (Espaniola) (Fanaovan-gazety Ho An'ny Fandriampahalemana) fa afaka ampiandrasina ny resaka mikasika ny adihevitra toa izany. Natao ho an'ny resaka miaraka amin'ny olon-kafa ireo andron'ny WSF izay nikaon-doha mikasika olana mitovy, nampisy fahasamihafàna ary nandray anjara mba hahatanteraka ny fanorenana tontolo vaovao .
Indrisy, tsy ny olona rehetra ao Karakas no nahatakatra ny fahafahana lehibe azo avy amin'ny fananganana tambajotra sosialy sy ny fametrahana fiarahamiasa izay mety ateraky ny FSM (fanafohezana amin'ny teny malagasy ny Fanehoankevitra Sosialy Manerantany / WSF ho an'ny anglisy). Maro ny olona mbola misaona satria tsy afaka ny hivoaka miboridana mba ho alain'i Spencer Tunick sary. Ny sasany dia mientanentana tsotra izao satria any Venezoela ilay mpitarika ny hetsika rindrambaiko malalaka, Richard Stallman (Espaniola).